Fanamarinana vulnerability | Reef Resilience
Ny fanombantombana amin'ny fahamatorana dia fitaovana ilaina ho an'ny fahatakarana ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro eo amin'ny rafitra voajanahary sy ny fiarahamonina olombelona. Manome tari-dalana izy ireo amin'ny fanaovana safidy mifantoka amin'ny fametrahana na fanavaozana ny laharam-pahamehana amin'ny fiarovana sy fampandrosoana ary fanapahan-kevitra momba ny fitantanana.
Ny fanombantombana amin'ny fahamendrehana matetika dia miresaka momba ireo singa telo manan-danja amin'ny fahasosorana: fipoahana, fahatsapana ary fahaiza-manao. ref
Exposure - ny tahan'ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny loza mety hitranga amin'ny rafitra iray (ohatra, ny habeny, ny faharetana, ny faharetan'ny haintrano na ny hainandro, toy ny rivo-doza)
fahatsapana - ny mari-pahaizana izay misy fiantraikany amin'ny fiovan'ny toetry ny toetrandro na ny loza voajanahary
Adaptive capacity - fahafahan'ny rafitra iray miatrika na mifanaraka amin'ny fanovana, ao anatin'izany ny fiantraikan'ny tontolo iainana na ny fanovana politika
Na dia ny toe-piainana sy ny loza aza no mitarika ny fiatraikany, ny fahatsapana sy ny fahaiza-manao mampifanaraka dia misy fiantraikany amin'ny toe-karena, politika, kolontsaina ary andrim-panjakana. Ny sary etsy ambany dia mampiseho ireo singa marefo ary manasongadina ny fifandraisana misy eo amin'ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina. ref
Toetoetran'ny vulnerabilita mampiseho ny firaisana ara-nofo eo amin'ny rafitra momba ny tontolo iainana sy sosialy (mody
avy amin'ny Marshall et al. 2009).
Nahoana no mora voan'ny aretina?
Ny fanombanana ny fahamendrehana dia manome karazana fampahalalana roa ilaina amin'ny drafitry ny fiarovana: 1) Famantarana izay Ny karazana, ny rafitra, na ny tanjona hafa momba ny fiarovana dia mety hitera-pahavoazana; ary 2) Fahatakarana Nahoana malemy izy ireo.
Ny fanombanana amin'ny fahamatorana dia afaka manampy amin'ny:
Manandrana karazana na tontolo voajanahary ho an'ny hetsika fitantanana
Manokana ny loharanon-karena voaaro
Fantaro ireo fihetsika izay mampihena ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny olona sy ny tontolo iainana
Ny solontenan'ny vondrona vehivavy iray dia miresaka momba ny fomba ahafahana mampiditra ny ahiahy avy amin'ny sembana / marginalized amin'ny drafitra fampifanarahana. Sary © TNC
Fanontaniana tokony hieritreretana mialoha ny fanombohana ny fanamarinana mora vidy ref
Inona no tanjon'ny fanombanana? Moa ve hampahafantatra ny paikady momba ny fiarovana, ny famolavolana politika, na ny fanentanana (fanabeazana)?
Iza no hampiasa ny fampahalalam-baovao azo avy amin'ny fanombanana ny fahalemena? Ary inona no antony?
Misy tanjona manokana (oh: haran-dranomasina, fambolena, trano ary fotodrafitrasa) na faritra ara-jeografika (oh: ny tanàna iray manontolo, MPA) te-handinika?
Inona avy ny fotoana sy ny vokatra ilaina mba handraisana fanapahan-kevitra na fanapahan-kevitra politika?
Misy toerana (faritra) na vondrom-piarahamonina sasantsasany izay mety ho marefo indrindra ary koa ny laharam-pahamehana ho an'ny fanombanana?